हामी योजनावद्ध तरिकाले अगाडि बढ्दैछौ – नगर प्रमुख कक्षपती | माण्डवी एफएम
प्रकाशित मिति : २०७६ भाद्र ५, बिहीबार ०९:०१
प्यूठानका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये जिल्लाकै सामरिक महत्व बोकेको प्यूठान नगरपालिकाको विगत दुई वर्षदेखि नगर प्रमुखको कार्यभार सम्हालेका अर्जुन कुमार कक्षपतीको जन्म २०२२ साल मंसिर २० गते बिजुवारमा भएको हो । स्थानीय कालिका थान आधारभूत विद्यालयबाट अध्ययन थालेका उनले प्रावि टारी, मुक्ति माध्यमिक विद्यालय रातामाटा हुँदै स्वर्गद्धारी क्याम्पसबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तिण गरे । त्यसपछि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण उनले २०४२ साउन १ गतेदेखि १८ वर्षको कलिलो उमेरमै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जागिरको सुरुवात गरे । कर्मचारी हुँदा पनि निजामति कर्मचारी युनियनको जिल्ला नेतृत्व सम्हालेका उनले गैरसरकारी संस्थाको जिल्ला अध्यक्षको रुपमा समेत यस अघि काम गरिसकेका छन् । सबै पक्षसँग समन्वय गर्न सक्ने छवि बनाएका उनै कक्षपतीसँग हामीले उनको व्यस्तताका कारण कार्यालय समय बाहेकको समयमा नगरको विकास लगायत विभिन्न विषयमा लामो अन्तरंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी
आज भोलि के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
आर्थिक वर्षको खरीद योजना बनाउनेमा जोड गर्दैछौ । गत आव ०७५÷७६ को समीक्षाको तयारी गर्दैछौ । तथ्यांकहरु संकलन तथा विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन बनाउनेतर्फ लागिरहेका छौं । समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । सबै वडा तथा विषयगत कार्यालयबाट खरीद योजना प्राप्त भइसकेको छ । अब केही दिन भित्र नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्दै छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर चौमासिक रुपमा योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढ्दै छौं ।
यहाँको नाम सामाजिक क्षेत्रसँग पनि जोडिने गरेको छ । यहाँ कहिलेदेखि सामाजिक क्षेत्रमा आवद्ध हुनुभयो ?
हामीले सामाजिक सेवा तिर ध्यान दिने गर्दथ्यौ । २०३९ कात्तिक महिनामा हामी विजुवार बजारमा रहेका १०–१२ जना युवाहरुले सांस्कृतिक, खेलकूद जस्ता क्रियाकलाप गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले कालिका युवा क्लव गठन ग¥यौं । यही बेलादेखि म सामाजिक सेवामा प्रवेश गरेको हुँ ।
सामाजिक क्षेत्रमा लागिरहेको यहाँलाई के कुराले राजनीतिक क्षेत्रतिर आकर्षित ग¥यो ?
म राजनीतिक व्यक्ति होइन । हिजोदेखि मेरो पारिवारिक परिवेश पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिको हैन । निजामति क्षेत्रमा सेवा गरियो । सामाजिक सेवाका काम गरियो । यो गर्दै गर्दाखेरी २०४८ सालतिर कर्मचारी युनियनमा पनि जिल्लाको नेतृत्व तहमा पुगेर काम गरे । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दाखेरी सबै क्षेत्रको सहयोग चाहिदो रहेछ । मैले तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलको साथ सहयोग पनि पाए । सामाजिक काम गर्नको लागि पनि केही छहारी चाहिने महसुस गरे । मेरो राजनीति गरेर माथिल्लो तहसम्म पुग्ने अहिले पनि त्यस्तो सोचाइ छैन ।
यहाँले मुख्य रुपमा दुई क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । यहाँको पृष्ठभूमि सामाजिक क्षेत्र हो र पछि राजनीतिक क्षेत्रमा आकर्षित हुनुभयो । यी दुई क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्रमा काम गर्न बढि रमाउनुहुन्छ ?
मलाई त सामाजिक क्षेत्रै राम्रो लाग्यो । मैले २५ वर्ष जति सामाजिक रुपमा पनि धेरै विकास निर्माणका कामहरु, सुशासनका कामहरुमा पनि लागे । मलाई सामाजिक अभियन्ताकै रुपमा काम गर्न मलाई राम्रो लाग्यो ।
गैरसरकारी संंस्थाको अध्यक्ष हुँदा त्यहाँ धेरै सिमितताहरु थिए । अहिले स्थानीय सरकारको प्रमुख भएर काम गर्ने अवसर पाउनुभएको छ । अहिले यहाँ आफै स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुभएको छ । त्यो र यसमा के के कुरा सजिला र के के कुरा अप्ठेरो लागेको छ ?
म सामाजिक अभियन्ता हुँदाखेरी पनि एउटा निश्चित निर्देशिका हुन्थ्यो । नीति नियम कानुन भित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हिजोको परिवेशमा पनि त्यस्तो धेरै दवाव हुने पनि थिएन । सामाजिक क्षेत्रमा आपैm नेतृत्व गर्ने योजना निर्माण प्रक्रियामा पनि सबैको सहभागिता गराउने । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विषयगत कार्यालय सबै बसेर योजना बनाउने गर्दथ्यौ । त्यसले गर्दाखेरी काम गर्न सहज बातावरण हुन्थ्यो । अहिले कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरी जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । त्यो अपेक्षाहरु स्थानीय सरकारले मात्र पूरा गर्न सक्दैन । जनतालाई चित्त बुझाउन धेरै चुनौति छ । दुईटा क्षेत्रलाई तुलना गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै सहज भएको महसुस गरेको छुँ । मलाई लाग्छ अहिले हामी सिमित ठाउँमा मात्र सिमित छौं । हिजो जिल्लाभरिका स्थानीय निकायमा जाँदाखेरी पनि सम्मान पाइन्थ्यो । जिल्ला तहमा पनि सम्मान हुन्थ्यो । अहिले हामी सिमित घेरामा छौं तर हाम्रो जिम्मेवारी धेरै छ ।
यहाँले बितेको दुई वर्षमा नगरको विकासका लागि के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?
हामीले विशेष गरेर कानुन बनाउन समय खर्च ग¥यौ । हामीले यो अवधिमा ४० वटा ऐन नियम कार्यविधि बनाइसकेका छौं । हामी स्थानीय तह गठन भएको संक्रमणकालीन परिवेशमा पदभार सम्हाल्न आइपुग्यो । नगरको आधारभूत पूर्वाधार पनि थिएन । १५ वर्षे नगरको गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं । नगर शिक्षा योजना गरायौं । खानेपानी, सडक, पर्यटन तथा खेल क्षेत्रको विकासका लागि करिव एक दर्जन ठूला योजनाहरुको बिस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरिसकेका छांैं । केही योजनाहरुमा काम पनि शुरुवात भैसकेको छ । कृषिका पकेट क्षेत्र बनाउने कुराहरुमा पनि बढि ध्यान दिइरहेका छौं । किसानको लामो समयको माग बमोजिम प्रदेश सरकारको सहयोगमा शितभण्डार निर्माण गर्दैछौ । बस्ती विकासको योजना पनि हामीले अगाडि सारेका छौं । भित्रिकोट दरवारलाई पर्यटनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकियोस् भनी योजनावद्ध तरिकाले अगाडि बढ्दैछौं ।
शिक्षामा यहाँहरुले गरेका महत्वपूर्ण कामहरु के के हुन् ?
हामीले निशुल्क शिक्षालाई अगाडि बढाउन खोजिराखेका छौं । अहिले सरकारले शिक्षालाई नीतिमा मात्र निशुल्क बनाएको छ । घुमाई फिराई गरिव जनतासँग शुल्क ल्याएर मात्र भर्ना गर्ने परम्परा रहदै आएको थियो । हाम्रो नगरसभाले पूर्ण रुपमा निशुल्क भर्ना गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको यस शैक्षिक सत्रमा भर्ना गर्दा विद्यालयले लिएको पैसा खरीद योजना अनुसार फिर्ता गर्ने पनि हाम्रो योजना रहेको छ । हामीसँग ४ वटा प्राविधिक शिक्षण संस्था छ । कृषिको बालविद्या मावि मरन्ठाना र क्षेत्रविकास प्रावि पुण्यखोलामा रहेको छ । जमावि बाग्दुला र मुमावि रातामाटामा रहेको छ । यी विद्यालयहरुलाई नगरपालिकाले सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । बिशेष गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि शिक्षाको लगानीलाई अलि जोड दिन थालेका छौं । शिक्षाको परिवर्तन नभई सिंगो नगरको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता अभिवृद्ध गर्ने भौतिक पूर्वाधारलार्य अलि व्यवस्थित गर्ने । शिक्षक रिक्त रहेको ठाउँमा शिक्षक पदपुर्ति गर्ने । र बालबिकासलाई पनि पूर्वाधारयुक्त बनाउने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं ।
कृषि र पशुपालनको अवस्था कस्तो छ ? लगानी धेरै हुने प्रतिफल आइरहेको छैन नि ?
अहिलेसम्म कृषि र पशु को क्षेत्रमा राज्यको लगानी धेरै भइसकेको छ । यो बितरणमुखी भयो, अनुदान मुखी भयो । जुन उद्देश्य अनुसार लगानी भएको थियो त्यो अनुसारको परिणाम पनि निस्केन । अब यसरी हुँदैन अब हामीले साच्चै जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने हो भने खेती गर्ने पनि पकेट क्षेत्र बनाएर खेती गर्नुपर्दछ । कम्तीमा ५ रोपनीदेखि माथि १०–१२ रोपनीसम्म खेती गरिनुपर्दछ ।
अहिले त्यस्ता कति वटा पकेट क्षेत्र छन् ?
अहिले नगरपालिकाले दुई वटा तरकारीको पकेट क्षेत्र दाखाक्वाडी र मरन्ठाना क्षेत्रमा पकेट कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ । बाख्राको तीन वटा व्यवस्थित बाख्रापालनको पकेट भएको छ । माहुरी पालनको एउटा पकेट क्षेत्र भएको छ ।
तर यसमा आशातित उपलव्धी त देखिदैन त ?
हामीले भरखरै शुरुवात गरेका छौं । हामीले पकेट क्षेत्रको रुपमा गत आवदेखि शुरुवात गर्न खोजेका छौं । म गर्वसाथ के भन्न चाहन्छु भने कम्तिमा विदेश जान लागेका केही युवाहरुलाइ रोक्न सफल भएका छौं । विदेश जान सम्पूर्ण कागज बनाइसकेका युवाहरुलाई हामीेले कोहीलाई बाख्रापालनमा, कोहीलाई तरकारी खेतीमा, कोहीलाई कुखुरा व्यवसायमा संलग्न गराएर विदेश जाने तयारीमा रहेकालाई रोक्न सफल भयौ । पहिलोपटक यस्तो गर्दैछौ । यसको नतिजा पूर्ण रुपमा हेर्न केही पर्खनुपर्ने हुन्छ । मलाइ लाग्छ, उहाँहरुले आप्mनो व्यक्तिगत लगानी समेत लगाएर उत्साहका साथ व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । १०–१२ वर्ष भारतमा काम गर्दै आएको विजयनगरका ३ वटा दाजुभाइहरु मिलेर २०–२५ लाख लगानी गरेर ठूलो फर्म गराएर बाख्रापालन गरिरहनुभएको छ । त्यहाँ हामीले केही नयाँ प्रविधि जडानको लागि सहयोग ग¥यौं । त्यो व्यवसाय राम्रो देखिएको छ । गरेपछि हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण त्यो बाख्रापालन व्यवसाय देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणको लागि ध्यान दिन पनि खोजेका छौं । बाग्दुलामा तरकारी तथा फलपूmल बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बाग्दुलामा १० वर्ष जग्गा लिजमा लिएर २८ वटा सर्टर निर्माण गरेका छौं । हामी अव छिट्टै त्यो व्यवस्थित गर्दछौं ।,
नदि नियन्त्रणमा के कामहरु भइरहेको छ ?
हामीले नगरपालिकाले शुरुदेखि नै सम्वन्धित मन्त्रालय प्रदेशहरुमा, उर्जा मन्त्री, सचिवलाई यहाँ ल्याएर जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले गरेको डिपिआर प्रदेश उर्जा मन्त्रालय, संघको उर्जा मन्त्रालयमा पनि हामीले डकुमेण्ट पेश गरेका छौं । मलाई लाग्छ संघको कार्यक्रममा यो आर्थिक वर्षमा झिम्रुक माडी आयोजनाको रुपमा नदि नियन्त्रणको कार्यक्रम बन्न सफल भएको छ । संघले दुई तीन जिल्लालाई गासेर बहुउद्देश्यीय योजनाको रुपमा काम गर्दै छ । झिमु्रक माडीको करिडोर आयोजनाकै रुपमा स्वीकृत गरिसकेको छ । मलाई लाग्छ अब छिट्टै कार्यालय स्थापना हुँदैछ रोल्पा र प्यूठानको बीच खण्डमा । त्यसले दुईवटा काम गर्दैछ एउटा तटवन्धको काम गर्दै छ अर्को सिचाइको पनि काम गर्दैछ ।
बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने नगरको योजना के छ ?
बाहै्र महिना गाडी चल्ने बाटो बनाउनुपर्छ भनेर केही ग्रयावलको काम पनि शुरुवात गरेका छौं । नाली नहुँदा बाटोहरु धेरै बिग्रिरहेकाले पनि नाली निर्माणमा ध्यान दिएका छौं । नगरको यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने नगर यातायात गुरुयोजनाहरु निर्माण भइसकेको छ त्यसलाइ गतवर्ष केही परिमार्जन गरेका छौं । त्यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
फोहर मैला व्यवस्थापन नगरको चुनौतिको रुपमा रहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले धेरै प्रयत्नहरु गरिराखेका छौं । साविकको जिल्ला विकास समिति हुने बेलामा बनेको ल्याण्डफिल्ड साइड अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । त्यसमा नगर पालिकाले पनि ठूलो लगानी ग¥यो । त्यहाँ दुर्गन्ध फैलिएको र जनता आक्रोषित भएको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकोले त्यसमा हामी असफल भयौं । त्यसले गर्दा हामीले फोहोर व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल ग¥यौ । यो बीचमा नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र नगरपालिकाको कार्यालयको छेउमै शुरुवात गरेका छौं । मुख्य कुहीने चिजले रहेछ वातावरण प्रदुषण गर्ने । अहिले करिव ९० प्रतिशत कुहिने चिजको मल परिणत भइसकेको छ । त्यो मल बनाउने कामको शुरुवात छ । प्रयोग पनि भइसक्यो । एकदमै राम्रो मल उत्पादन भएको छ । २५ रुपैया किलो किन्न पाइन्छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नगरवासीको चेतनाको महत्वपूर्ण भुमिका हुने गर्दछ तर प्यूठान नगरले त्यसतर्फ काम गरेको खासै देखिदैन त ?
गतवर्ष त घरदैलो काम केही ग¥यौ । प्रत्येक बजार वस्तीमा बजार सरसफाइ समिति पनि गठन ग¥यौं । उठ्ने शुल्कको ४० प्रतिशत सम्वन्धित बजार सरसफाई समितिलाई दिने ६० प्रतिशत हामीले लिने त्यो अभ्यास पनि हामीले शुरु गरेका छौं । हामीले घर घरमा चेतना जगानुपर्ने अवस्था छ । फोहोर कुहिने एकतर्फ, नकुहिने अर्कोतर्फ, अनि धातुजन्य पदार्थ गरी ३ वटा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । यसमा नगरवासीले सहयोग गर्नुपर्दछ । यसको लागि यस आवमा घरघरमा गएर चेतना फैलाउने पनि कार्यक्रम राखेका छौं । फोहोर अझैसम्म पनि मिसाएर आइरहेको छ । कम्तीमा नगरवासीको घरबाटै फिल्टर भएर आइदियो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ ।
नगरले फोहोर व्यवस्थापन लगायत सामाजिक परिचालनमा अन्य निकायसँग पनि साझेदारी गरेको छ ?
जिल्ला कृषि सहकारीसँग हामीले फोहोर व्यवस्थापनको काममा सहकार्य गरिराखेका छौं । नगरपालिकाले उठेको फोहोर गाडीमा राखेर फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र सम्म ल्याइदिन्छौ । त्यसपछिको फोहोर व्यवस्थापनको काम उहाँहरुले गर्नुहुन्छ । हामीेले स्थानीय गैर सरकारी संस्थाको साझेदारीमा सामाजिक परिचालनको काम गर्ने भनेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पास गरेका छौं । अब यसलाई व्यवहारमा लैजाने प्रयत्न गर्दैछौ । अब सामाजिक परिचालनको क्षेत्रमा नगरपालिकाले एक्लै गर्न सम्भव नै छैन । प्यूठान नगरपालिकाको नगर क्षेत्रमा ४–५ वटा राम्रो गैरसरकारी संस्थाहरु छन् उनीहरुलाई कसरी काम दिन सकिन्छ भनेर नीति पास गरेका छौं । कुन कुन सेक्टरमा काम हुन सक्छ । सामाजिक परिचालनको जिम्मेवारी स्थानीय गैरसरकारी संस्थालाई दिनुपर्छ भनेर त्यो सोच पनि बनाइराखेका छौं । त्यो भयो भने कम्तीमा नगरपालिका नगरवासीसँग सामाजिक परिचालनको जिम्मेवारी लिइदिने, योजना निर्माणमा सँगै बसिदिने त्यो भयो भने अझ सहज बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ । यसलाई अलि व्यवस्थित रुपमै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
नगरको राजश्व वा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने नगरको कस्तो रणनीति छ ?
राजश्वको क्षेत्र बढाउन हामी लागिरहेका छौं । यो वर्ष पनि हामीले धेरै गृहकार्य ग¥यौ । नगरवासीलाई कर धेरै बढाउने भन्दा पनि क्षेत्र बढाउ भनेर हामीले धेरै गृहकार्य गरेका छौं । अझै पनि ४–५ वटा क्षेत्र बढाउँदै छौं । यसअघि व्यक्तिगत भाडा हामीले लिएका थिएनौ । यस वर्ष अभ्यास गरौ न त भनेर लगत लिएर ३ प्रतिशत भाडा कर लिएर शुरुवात गर्दैछौ । पार्किङ्गको पनि एक दुई ठाउँमा व्यवस्था गर्दैछौ । बाग्दुला, विजुवार, जुम्रि वसपार्कमा पनि पार्किङको व्यवस्था गरेर पार्किङमा पनि केही शुल्क लिदै छौ । प्रमुख बजार क्षेत्रमा जामको समस्या आउन थालेको यस वर्ष नीजी क्षेत्रको सहयोग लिएर दुई वटा स्थानमा पार्किङ्ग निर्माण गर्दैछौ. ।
बाग्दुला टिकुरीको वसपार्क कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ ।
बसपार्क पुग्ने बाटो निर्माण कार्य पूरा भएपछि तत्कालै बसपार्क सञ्चालन गर्ने योजनामा छौं । मंसिर महिनाभित्र बाटो पूरा भयो भने पुस महिनाभित्रै बसपार्कमा बस लैजानुपर्छ भनेर कडाइकासाथ यसलाई लागू गर्छौ ।
वडा कार्यालयबाट राजश्व संकलन किन हुन सकिरहेको छैन ?
सूचना प्रविधि कमजोर भएको कारण यो वर्ष हामीलाई समस्या भएको हो । गत वर्षदेखि नै हामीले सबै वडाबाट राजश्व बुभ्mने परिपाटी मिलाउँन खोजिरहेका छौं । एक हप्ताको तालिम दिने र सेवा सञ्चालन गर्दैछौ । मुख्य समस्या हाम्रो कर्मचारी नभएको कारणले गर्दाखेरी हो । कम्प्युटर चलाउन सक्ने दक्ष कर्मचारी छैन । कम्तीमा कम्प्युटर चलाउन सक्ने कर्मचारी हुनुप¥यो । हामीले लोकसेवाबाट पनि २७ जना कर्मचारी माग गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ कात्तिक मंसिरदेखि काम शुरु हुन्छ । नेट नहुँदा समस्या हुन्छ । हामीले छिट्टै प्रत्येक वडाबाट राजश्व उठाउँदै छौं । नगरवासीले धेरै दुःख पाएको स्थिति छ । १०० डेढ सय बुझाउन ४–५ सय खर्च गनुपर्ने अवस्था छ । हामीले छिटै यसलाई समाधान गर्नेतिर बढि ध्यान दिइरहेका छौं ।
यहाँको नगर कस्तो बनाउने सपना छ ?
कम्तीमा नगरपालिकाको यातायात क्षेत्रमा कालोपत्रे, व्यवस्थित बसोवास, अहिलेसम्म भएका बाटाहरुलाई वातावरणमैत्री बनाउने, भित्री सडकहरु पनि कालोपत्रे नालीहरु पु¥याउन सक्यो भने । ग्रामीण जनतालाई खानेपानीको समस्या हल ग¥यौ भने पूर्वाधार विकासका धेरै समस्याहरु कम हुनेछन् जस्तो लाग्दछ ।
अब धेरै कुरा त आइसकेको छ । जनप्रतिनिधिले माात्र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी दिदाखेरी त्यो पूरा हुँदैन । त्यो पूरा गर्न सबै नगरवासीको सहयोगको अपेक्षा गरेको छुँ । कम्तीमा सकारात्मक सोचका साथ नयाँ अभियानमा हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौं । सबै पक्षको सहयोग भयो भने मात्र नगरपालिका राम्रो बन्न सक्छ । नगरपालिका समृद्ध हुन सक्छ । हाम्रो सिमितताहरुलाई मध्यनजर गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छुँ ।
गाउँपालिकाको बिकासमा गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीको प्रतिवद्धता